Gold-nopetahany takela Anklets
vy tariby bangles
Chain rohy haba
Gold-nopetahany takela milentika
Steel loko milentika
Stainless Steel firavaka Sets
Manasa-vato soa Jewelry Sets
Stainless Steel voavola
Kavina voavola tamin'ny gadra
Stainless Steel kavina voavola
fanariana kavina voavola
Lover kavina voavola
taloha-nopetahany takela kavina voavola
Manasa-vatosoa kavina voavola
harato vava vola aminy,
vy loko vava vola aminy,
Jewelry Jinyun naorina tamin'ny 2006. Ny orinasa no misy any Guangzhou, Shina. Manokana isika ao amin'ny Stainless Steel Jewelry Wholesale amin'ny B2B, ary efa mihoatra ny 10 taona ny raharaha any amin'ny tsipika ity. Hatramin'izao, dia efa niara-niasa tamin'ny mpamatsy 300 mahery nanomboka teo, ary hanana ny fomba fandoavam-bola mety indrindra, tsara indrindra vidin-javatra sy ny tolotra ho an'ny mpanjifa.
Misy maherin'ny 100.000 isan-karazany dia afaka mahita teti-dratsy avy amin'ny tranonkala, www.julongsteeljewelry.com . Ny modely vaovao dia havaozina amin'ny alalan'ny isan-kerinandro nandritra ny mihoatra noho ny 2000pcs vokatra vaovao. Notendren'Andriamanitra ho vokatra isan-karazany be dia be, ary afaka manome fahafaham-po tanteraka amin'ny mpanjifa maro samy hafa avy amin'ny firenena samy hafa 'zavatra ilain'ny.
Manana mihoatra ny 10.000 no voasoratra anarana mpikambana avy manerana izao tontolo izao, dia mazàna izy ireo mba hanao tsy tapaka indray-tahiry izay mety hitondra azy ireo satria mety maro ny mpanjifa ihany no mila ny 3-15 andro handray ny entany. Tena ambany dia ambany isika manome zavatra vidiny sy ny fandoavam-bola haingana sy mora izany, toy ny Pay-Pal, Bank famindrana, Western Union sy ny vola gram.
Raha toa ianao ka liana, masìna ianao, aza misalasala mba hifandray aminay.